Ahoana no Hampianarana ny Ankizy hoe Misy Olona Ambony Noho Isika?
Misy Olona Ambony Noho Isika
INOAKO fa ekenao hoe misy olona ambony sy lehibe ary matanjaka noho izaho sy ianao. Iza izany, hoy ianao?... Jehovah Andriamanitra. Ary ambony noho isika koa ve ny Zanany, ilay Mpampianatra Lehibe?... Mazava ho azy fa ambony noho isika izy.
Efa niaraka tamin’Andriamanitra tany an-danitra i Jesosy. Anjely na Zanaka ara-panahy izy tamin’izany. Nanao anjely na zanaka ara-panahy hafa koa ve Andriamanitra?... Ie, nanao anjely an-tapitrisa izy. Ambony sy mahery noho isika koa ireny anjely ireny.—Salamo 104:4; Daniela 7:10.
Iza no anaran’ilay anjely niresaka tamin’i Maria, raha tadidinao?... Gabriela. Nilazany i Maria fa Zanak’Andriamanitra ilay zaza haterany. Napetrak’Andriamanitra tao an-kibon’i Maria ny ain’ilay Zanany, mba hahafahan’i Jesosy ho lasa zazakely ary nateraka teto an-tany.—Lioka 1:26, 27.
Inona no azo inoana fa nolazain’i Maria sy Josefa tamin’i Jesosy?
Mino ve ianao fa nisy izany fahagagana izany? Mino ve ianao fa niaraka tamin’Andriamanitra tany an-danitra i Jesosy?... Nilaza i Jesosy fa efa tany an-danitra izy taloha. Ahoana no nahafantarany an’izany? Azo inoana fa notantarain’i Maria taminy, tamin’izy mbola kely, izay nolazain’i Gabriela.Azo inoana koa fa nolazain’i Josefa taminy hoe Andriamanitra no tena Rainy.
Niteny avy tany an-danitra mihitsy Andriamanitra, rehefa vita batisa i Jesosy. Hoy izy: “Ity no Zanako.” (Matio 3:17) Nivavaka koa i Jesosy ny alina talohan’ny nahafatesany. Hoy izy: “Ray ô, mankalazà Ahy amin’ny tenanao, dia amin’ny voninahitra niarahako nanana taminao, fony tsy mbola ary izao tontolo izao.” (Jaona 17:5) Tena nangataka ny hiverina tany an-danitra i Jesosy, mba hiaraka indray tamin’ny Rainy. Ahoana no hahafahany ho velona any an-danitra indray?... Tsy hety mantsy izany raha tsy haverin’i Jehovah Andriamanitra ho anjely indray izy.
Ity àry misy fanontaniana lehibe tiako hapetraka aminao: Tsara daholo ve ireo anjely, araka ny hevitrao?... Ie, tsara daholo izy ireo taloha. I Jehovah mantsy no nanao azy ireny, ary tsara avokoa ny zavatra nataon’i Jehovah. Nisy anjely iray nanjary ratsy anefa taty aoriana. Inona no nahatonga an’izany?
Tsy maintsy miverina mandinika ny tantaran’i Adama sy Eva isika, mba hahitana ny valiny. Misy milaza mantsy fa angano ihany ny tantaran’ireo lehilahy sy vehivavy voalohany ireo. Fantatr’ilay Mpampianatra Lehibe anefa fa zavatra tena nisy ilay izy.
Napetrak’Andriamanitra tao amin’ny zaridaina tsara tarehy nantsoina hoe Edena i Adama sy Eva. Paradisa io toerana io. Afaka niteraka maro izy ireo ary niaina mandrakizay tao amin’ilay Paradisa. Nisy zavatra lehibe tsy maintsy nianaran’izy ireo anefa. Efa noresahintsika izy io, ka andeha hojerena raha tadidinao.
Ho velona mandrakizay tao amin’ny Paradisa i Adama sy Eva raha nanao inona?
Nilaza tamin’i Adama sy Eva i Jehovah fa afaka nihinana ny voankazo rehetra tiany tao amin’ilay zaridaina izy ireo, fa hazo iray monja no tsy azony nihinanana. Nolazain’Andriamanitra taminy hoe inona no hitranga raha nihinanany ilay hazo. Hoy izy: ‘Ho faty tokoa ianao.’ (Genesisy 2:17) Inona àry ilay zavatra tsy maintsy nianaran’i Adama sy Eva?...
Tsy maintsy nianatra nankatò izy ireo. Tena ilaina ny mankatò an’i Jehovah Andriamanitra raha tiantsika ny ho velona! Tsy ampy ny fampanantenan’i Adama sy Eva hoe hankatò an’Andriamanitra. Tokony hasehony tamin’ny zavatra nataony fa nankatò izy. Raha nankatò izy ireo dia ho nanaporofo fa tia an’i Jehovah, ary tiany raha izy no ho Mpanjakany. Amin’izay, dia ho afaka ny ho velona mandrakizay tao amin’ilay Paradisa izy ireo. Ahoana kosa raha nihinana tamin’ilay hazo izy ireo?...
Hidika izany fa tsy tena nankasitraka ny zavatra nomen’Andriamanitra azy izy ireo. Ho nankatò an’i Jehovah ve ianao raha teo amin’ny toerany?... Nankatò i Adama sy Eva tamin’ny voalohany. Nisy olona ambony noho izy ireo anefa, namitaka an’i Eva, avy eo. Nasainy tsy hankatò an’i Jehovah i Eva. Iza ilay olona?...
Iza no nampiasa bibilava mba hiresahana tamin’i Eva?
Lazain’ny Baiboly fa nisy bibilava niresaka tamin’i Eva. Fantatrao fa tsy mahay miteny ny bibilava. Ahoana àry no nahaizany niteny?... Nisy anjely nanao izay hinoana fa niteny ilay bibilava. Io anjely io anefa no tena niteny, fa tsy ilay bibilava. Efa nanomboka ho ratsy loha ilay anjely. Tiany hivavaka taminy sy hanao izay lazainy i Adama sy Eva. Tiany hoe izy no hivavahana fa tsy Andriamanitra.
Nampiditra hevitra diso tao an-tsain’i Eva àry io anjely ratsy io. Hoy izy, tamin’ny alalan’ilay menarana: ‘Tsy nilaza ny marina taminareo Andriamanitra. Tsy ho faty ianareo raha mihinana amin’io hazo io. Ho hendry tahaka an’Andriamanitra ianareo.’ Ho nino izany ve ianao?...
Nanomboka te hahazo zavatra tsy nomen’Andriamanitra azy i Eva. Nihinanany ilay voankazo voarara. Nomeny koa i Adama avy eo. Tsy nino izay nolazain’ilay bibilava i Adama, nefa nahery kokoa noho ny fitiavany an’Andriamanitra ny faniriany hiaraka tamin’i Eva. Nihinana tamin’ilay voankazo koa àry izy.—Genesisy 3:1-6; 1 Timoty 2:14.
Inona no vokany?... Nanjary tsy lavorary i Adama sy Eva, ka nihantitra ary maty. Tsy lavorary izy ireo ka nanjary tsy lavorary koa ny zanany rehetra. Nihantitra izy ireo ary maty koa tamin’ny farany. Tsy nandainga àry Andriamanitra!Tena ilaina ny mankatò Azy raha tiantsika ny ho velona. (Romanina 5:12) Lazain’ny Baiboly fa Satana Devoly no iantsoana an’ilay anjely nandainga tamin’i Eva, ary demonia ireo anjely hafa nanjary ratsy koa.—Jakoba 2:19; Apokalypsy 12:9.
Naninona i Adama sy Eva rehefa tsy nankatò an’Andriamanitra?
Azonao amin’izay ve hoe nahoana no nanjary ratsy ilay anjely tsara nataon’Andriamanitra?... Satria nanomboka ho ratsy loha izy. Te ho ambony indrindra izy. Fantany fa hiteraka i Adama sy Eva, araka ny tenin’i Jehovah, ka tiany hivavaka aminy daholo ireo taranany rehetra ireo. Tsy tian’ny Devoly hankatò an’i Jehovah ny olona ka andramany ampidirana hevitra diso ao an-tsainy.—Jakoba 1:13-15.
Lazain’ny Devoly fa tsy misy olona tena tia an’i Jehovah. Lazainy fa tsy tia an’Andriamanitra izaho sy ianao, ary tsy tena tiantsika ny hanao izay lazain’Andriamanitra. Lazainy fa rehefa mandeha tsara ny fiainantsika vao mankatò an’i Jehovah isika. Marina ve izany? Manao an’izany tokoa ve isika?
Nolazain’ilay Mpampianatra Lehibe fa mpandainga ny Devoly! Noporofoin’i Jesosy fa tena tia an’i Jehovah izy, satria nankatò Azy. Nankatò an’Andriamanitra foana izy, na mora na sarotra ny nanao izany. Tsy nivadika tamin’i Jehovah izy mandra-pahafatiny. Izany no antony nananganan’Andriamanitra azy tamin’ny maty mba ho velona mandrakizay.
Iza àry, hoy ianao, ilay fahavalontsika lehibe indrindra?... Ie, Satana Devoly. Afaka mahita azy ve ianao?... Mazava ho azy fa tsia! Fantatsika anefa fa misy izy, ary ambony sy mahery noho isika. Iza anefa no mbola ambony noho ny Devoly?... Jehovah Andriamanitra. Fantatsika àry fa afaka miaro antsika Andriamanitra.
Vakio ny momba ilay Olona tokony hivavahantsika: Deoteronomia 30:19, 20; Josoa 24:14, 15; Ohabolana 27:11; Matio 4:10.
Hizara Hizara Misy Olona Ambony Noho Isika